Emirates dia mamerina ny rohy transatlantika eo amin'i Milan sy New York JFK
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Emirates dia mamerina ny rohy transatlantika eo amin'i Milan sy New York JFK
Vao tsy ela akory izay ny Emirates dia nanamafy ny fahavononany ho an'i Etazonia tamin'ny famerenana ny serivisy ho an'ny vavahady 11
Emirates dia hanohy serivisy mivantana eo anelanelan'ny Milan Malpensa sy ny New York John F Kennedy International Airport
Ny sidina Milan-New York JFK dia ho fanitarana ny sidina efa misy an'i Emirates mankany Milan
Ny serivisy miverina eo anelanelan'ny Dubai-Milan-JFK dia hanome safidy bebe kokoa an'ireo mpandeha
Nanambara ny Emirates fa hanohy ny serivisiny mivantana eo anelanelan'ny Milan Malpensa sy ny seranam-piaramanidina iraisampirenena New York John F Kennedy manomboka ny 1 Jonast, 2021, fanokafana indray ny fifandraisana misy eo amin'i Eropa sy Etazonia.
Ny sidina Milan-New York JFK dia ho fanitarana Emirates'sidina efa misy mankany Milan EK205, tantanan'ny Boeing 777-300 ER, manome seza 8 ao amin'ny Kilasy Voalohany, seza 42 tsy misy fangarony ao amin'ny orinasa ary seza 304 namboarina ergonomika amin'ny kilasy Economy. Ny serivisy an'ny zotram-piaramanidina mankany New York JFK dia hitombo intelo isan'andro hanohanana ilay rohy vaovao, hanamorana ny varotra sy fizahan-tany ary hanome mpanjifa eran-tany fifandraisana, mora ary safidy.
Ny sidina Emirates EK205 dia handao an'i Dubai (DXB) amin'ny 09: 45hrs, tonga ao Milan (MXP) amin'ny 14: 20hrs alohan'ny hiaingany indray amin'ny 16: 10hrs ary tonga any New York John F Kennedy International Airport (JFK) amin'ny 19: 00hrs mitovy ihany andro Ny sidina EK206 miverina dia hiala amin'ny JFK amin'ny 22:20 ora, tonga any Milan amin'ny 12: 15hrs ny ampitso. EK206 dia hiala indray avy any Milan ny ampitso amin'ny 14: 05hrs mankany Dubai izay hahatongavany amin'ny 22:10 ora (eo an-toerana hatrany ny fotoana).
Vao tsy ela akory izay ny Emirates dia nanamafy ny fahavononany ho an'i Etazonia tamin'ny famerenana ny serivisy amin'ny vavahady 11 (ao anatin'izany ny Orlando sy Newark tamin'ny volana Jona). Ny serivisy niverenan'i Dubai-Milan-JFK dia hanolotra safidy bebe kokoa ho an'ireo mpandeha avy any Eropa, Moyen Orient, Azia Andrefana, ary Afrika amin'ny alàlan'ny Dubai na Milan ary koa manome fidirana tsy misy tohatra amin'ireo tanàn-dehibe amerikana ankoatr'i New York amin'ny alàlan'ny fifanarahana codeshare an'ny kaompaniam-pitaterana miaraka amin'i Jetblue.
Namerina niasa tamina soa aman-tsara ny seranam-piaramanidina manerana ny tambajotrany. Hatramin'ny nanombohany soa aman-tsara ny fizahantany tamin'ny Jolay, Dubai dia mijanona ho iray amin'ireo toerana fialantsasatra malaza indrindra eran'izao tontolo izao, indrindra mandritra ny vanim-potoana ririnina. Misokatra ny tanàna ho an'ny mpitsidika iraisam-pirenena sy mpitsidika fialamboly. Manomboka amin'ny tora-pasika feno masoandro sy ireo hetsika lova ho an'ny fandraisana vahiny sy fialamboly kilasy manerantany, Dubai dia manolotra karazana traikefa an-tsokosoko manerantany. Io no iray amin'ireo tanàna voalohany eran-tany nahazo tombo-kase Safe Travels avy amin'ny World Travel and Tourism Council (WTTC) - izay manohana ny fepetra feno sy mahomby any Dubai hiantohana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny vahiny.